Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုထံ ကာကွယ်ဆေးကူညီမှုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုထံ ကာကွယ်ဆေးကူညီမှုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းထားသော Sinovac ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအသုတ် ရောက်ရှိလာသည်ကို မတ် ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) CHINA
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုထံ ကာကွယ်ဆေးကူညီ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ထံ ကာကွယ်ဆေးများ တင်ပို့လျက်ရှိသလို ကာကွယ်ဆေးသုတေသန၊ ဖော်ထုတ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံကျော်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က မတ် ၃၀ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးအရေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVAX အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများထံ ဖြန့်ဖြူးထားမှုများအကြား ကြီးမားသော ကွာဟမှုကို ချေဖျက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus က မတ် ၂၉ ရက်တွင် သတိပေးလိုက်ပြီးနောက် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဟွာချွမ်းရင်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စာရင်းအင်းများအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ဆေး၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်၌ ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများအနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံမှ ကာကွယ်ဆေးများ မရရှိဘဲ သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်ဘဲဖြစ်နေစဉ်တွင် ချမ်းသာသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများစွာကမူ ၎င်းတို့လူဦးရေ၏ နှစ်ဆမှ သုံးဆအထိ ကာကွယ်ဆေးများ မှာယူထားလျက်ရှိကြောင်း ဟွာက ဆိုသည်။
ကာကွယ်ဆေးသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ တိုက်ဖျက်ရာ၌ အားကောင်းသော လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သလို လူ့အသက်များကို ကယ်တင်ရန်လည်း မျှော်လင့်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအား ဖြည့်ဆည်းပေးသင့်ကြောင်းနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို အကျိုးရှိစေသင့်ကြောင်း ဟွာက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးအား ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်များအဖြစ် အသုံးပြုရေးကတိပြုထားခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေးများ လွယ်လင့်တကူနှင့် သင့်တင့်မျှတစွာ ရရှိရေး မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း၌ ဦးဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် COVAX တွင် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ ၁၀ သန်း ပံ့ပိုးပေးရေး ရှင်းလင်းသောကတိကဝတ်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ တိုက်တွန်းချက်ကိုလည်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ “ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အိုလံပစ်အားကစားပွဲများတွင် ပါဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အားကစားသမားတွေကို ကာကွယ်ဆေးတွေ ပံ့ပိုးပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်” ဟု ဟွာက ဆိုသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-03-30 21:27:21|Editor: huaxia
China has also responded to the call of the United Nations to donate vaccines to peacekeepers from all over the world, Hua said. "We are also willing to cooperate with the International Olympic Committee to provide vaccines to athletes preparing to participate in the Olympic Games."■
The second batch of the Sinovac vaccines donated by China arrive in Manila, the Philippines, on March 24, 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
Next Article တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 မူရင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိကြောင်း ပြောဆိုချက်မှာ အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူပြော